Ndeapi misika yemari, hunhu uye mhando | Ehupfumi Zvemari
Mukati mehurongwa hwehupfumi hwenyika, misika yemari ndeimwe yeakakosha manhamba. Iyo inzvimbo yekusangana yevanopa uye vanonyorera, ndokuti, kune avo vane zvigadzirwa zvekutengesa uye avo vanofanirwa kuzvitenga. Naizvozvo, kuinzwisisa zvakanaka kunogona kukubatsira iwe kuziva chii misika yemari, ndezvipi, zvine hunhu hupi kana mhando dziripo.
Kana iwe uchida kuziva ruzivo rwese urwu, saka isu tichatarisa pane ino yehupfumi chimiro uye isu tinokuudza nezvazvo.
1 Ndeapi misika yemari
2 Ndezvipi izvi
3 Hunhu hwemusika wemari
4 Mhando dzemisika yemari
5 Nei kushanda mumisika iyi kwakaomarara
Nenzira yakapusa, tinogona kutsanangura kuti misika yezvemari yakaita sei nzvimbo, yepanyama kana chaiyo, uko zvinhu zvinotengwa nekutengeswa. Nekudaro, izvi zvinhu hazvigone kunyatsonzwisiswa sezvigadzirwa zvezuva nezuva uye zvinhu kana masevhisi. Ndokunge, musika wezvemari hauna basa rekubatanidza vanhu vanotengesa miriwo kana zvipfeko neavo vanoida, asi zvinotarisa kune mamwe marudzi eidzi zvinhu, sekuchengetedzwa, zvigadzirwa uye / kana zviridzwa zvemari.
Munguva yakapfuura, misika yezvemari yakaitika munzvimbo dzakananga uko hukama hwakatsvakwa pakati pekuchengetedza kwaidiwa nemhuri uye mari dzinogona kupihwa nemakambani, pamwe nemari yematunhu. Ikozvino zviri nyore kwazvo nekuti zvinoitwa kuburikidza neterevhizheni mapuratifomu, zvekuti chete komputa kana nharembozha ndiyo inofanirwa kukwanisa kubatanidza.
Nekuda kwekushandisa kwavo uye nezvavanoita zvavanoita, zvinodzorwa nekutarisirwa. Mune ino kesi, chinzvimbo chine masimba makuru ndiro repakati bhangi, semuenzaniso, Bhanga reSpain kana iyo National Securities Market Commission (CNMV).
Iye zvino zvaunoziva kuti misika yezvemari chii, inguva yekuti iwe unzwisise zvavari. Izvi zvinangwa ku vanhu vanoisa mari yavo mukutsinhana nemubhadharo wakanaka, uye mukudzoka makambani anogamuchira mari kuti vakwanise kushanda uyezve, voita mari zhinji izvo zvinovaunzira mhedzisiro inobatsira kune vese.
Naizvozvo, zviitiko zvemisika yemari zvichagara zvichitongwa nemutemo wekupa uye kudiwa.
Zvino, kunyangwe iri riri iro basa guru, kuisa vatengesi nevatengi mukubata handicho chega chinhu chavachaite. Kune mamwe mabasa akadai se:
Ipa mvura kumidziyo.
Deredza kudyidzana kwemitengo pamwe neyakafa nguva.
Hunhu hwemusika wemari
Kune akawanda anokodzera ayo misika yemari inogona kutsanangura. Asi zvakanyanya, pane zvinhu zvishanu zvikuru mukati mawo izvo zviri:
Flexibility: Mupfungwa yekuti ivo vanokwanisa kuchinjika kune dzinoenderera shanduko dzinoitika mumutemo wekugovera uye wekuda.
Rusununguko: nekuti hapana zvipingamupinyi, kana mukutenga kana mukutengesa zvinhu zvemari (zvinopfuura zvinokwanisika zveumwe neumwe kutarisana nekutengeserana).
Amplitude: nekuti isu tiri kutaura nezve musika umo, iyo yakawanda huwandu hwezvinhu, iyo yakakura ichave iri.
Kudzika: Yakanangana nezviri pamusoro, iyo yakakura iri mumidziyo, huwandu hukuru hwekutengesa huchavapo uye huchagara vanhu vazhinji nemakambani.
Kujeka: nekuti iwe unogona kuwana nyore ruzivo nezve musika wezvemari kwaunoda kushanda.
Mhando dzemisika yemari
Kuenzanisa misika yezvemari kuri nyore, asi zvinoguma nekuve nemhando dzakasiyana zvinoenderana nezviyero zvakasiyana. Semuenzaniso, zvine hungwaru, isu tichava ne:
Misika yepuraimari yezvemari: Zvakare zvinonzi kupihwa, ndipo panoburitswa machengetedzo, senge kuchengetedzeka kwezvikwereti zveruzhinji, mabhondi emakambani, nezvimwe.
Sekondari misika: inonziwo kutaurirana. Kutengeswa kwemari yemari iri chikamu chemusika wekutanga unoshanda mazviri. Imwe yeanonyanya kuzivikanwa musika wekutengesa, asi kune akawanda akawanda ari kutanga kumuka.
Zvino, kana tikaronga misika yezvemari zvinoenderana nenguva yekudyara, ipapo tinowana:
Mari yemusika: iyo inotarisa pazvinhu zvenguva pfupi (inogara isingasviki mwedzi gumi nemasere kusvika gumi nesere).
Musika wemakambani: yezvinhu zvemari zvemazuva mazhinji. Izvo zvinonyanya kuzivikanwa ndezvezvikwereti, mari yakatarwa kana zvigadzirwa zvemari.
Uye zvakare, kupatsanura kwakapatsanurana kunotipawo misika inotevera:
Mari. Inonyanya kuzivikanwa mune idzi kesi ndeye Forex.
Mhedzisiro yemari, kwaunowana misika yakarongeka, senge remangwana remari kana sarudzo dzemari; kana vasina kurongeka.
Cryptocurrency musika. Parizvino chimwe chezvinhu zvakanyanya kukura chiri nekuda kweakasiyana madhijitari aripo.
Nei kushanda mumisika iyi kwakaomarara
Misika yezvemari, kunyanya mamwe acho akadai sedhijitari kana musika wemasheya kana kuchengetedzeka zvinokwezva kune vazhinji vanosarudza kuisa mari yavo mazviri. Nekudaro, haifanire kukanganikwa kuti ingangoita njodzi.
Nekuti pane kusasarudzika kwemitengo, nekuti ivo vanotongwa nemutemo wekupa uye kudiwa, uye kuti mamiriro enyika nehupfumi hwavo zvinokanganisa misika iyi, iyo mitengo uye mari dzinoitwa dzinogona kupera kana kudzika. Mune mamwe mazwi, unogona kuita mari yakawanda, kana iwe unogona kurasikirwa yakawanda.
Pakati pese, iyo inowedzera iko kushomeka kwehupfumi hwemari, iyo inogona kurasikirwa zvakanyanya; asi, panguva imwe chete, iyo purofiti inogona zvakare kuve yakakwira. Neichi chikonzero, vazhinji vanozviisa panjodzi mukutsvaga iyo "pfuma" yavakarota. Dambudziko nderekuti, kana usingaendi netsoka dzemutobvu, chinhu chacho chinogona kuva nenjodzi huru.
Kuti uite izvi, zvinodikanwa kuve ne kudzidziswa kwakanaka mumusika wezvemari umo unoshanda kuitira kutarisira matambudziko anogona kuitika mikana yakanaka yekutengesa inomuka kana kuuya.
Iye zvino zvaunoziva zvakawanda nezve misika yezvemari, unogona kutora danho rekupinda mairi kana kugara padivi. Kana iwe ukapinda, ita shuwa kuti iwe une ruzivo rwese kana kuti iwe une vanhu vanonyatsonzwisisa iyo misika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Ndeapi misika yemari